Burkina Faso oo diidday amarka AU - BBC Somali
Burkina Faso oo diidday amarka AU
Image caption Diblumaasiyiin ayuu isbuucii hore la kulmay Col Isaac Zida.
Hogaamiyaha ku meel gaarka ah ee Burkina Faso, Col Isaac Zida ayaa diiday oo meesha ka saaray laba isbuuc oo kama dambeysa ah oo ay midowga Afrika u qabteen inuu xilka ugu wareejiyo bulshada rayidka ah.
"Kama cabsaneyno cunna qabateyn, waxaan inbadan ka shaqeyneynaa xasilloonida," ayuu yiri Col Isaac Zida, hadalkaas ayuuna sheegay mar uu la hadlayay axsaabta siyaasadda iyo ururada bulshada rayidka ah.
Balse waxa ay ciidamada dalkaasi aqbaleen in sanadka soo socda la qabto doorashooyiinka dalkaasi, tani iyo xilligaasna waxay sheegeen inay dalka hogaaminayaan.
Militeriga ayaa awoodda dalkaasi la wareegay kaddib markii madaxweyne Blaise Compaore lagu qasbay inuu is casilo isbuucii hore, oo dad badan ay ku bannaan bexeen.